musha > Travel Europe > Tips For Western Europe By Train In 2 Weeks
Ichitora map Europe uye vachisarudza kwekuenda kungava rwaityisa! Ehe, kunyanya kana zvose une muri vaviri vhiki. On mukondinendi saka siyana uye akapfuma Mutsika, Vhiki mbiri angaita mupfupi! saka, anofanira kunge zvakanakisisa kuti zviparadzanise uye kushanyira chaizvo kumatunhu por rwendo. Kuti nzira chauri nokuzvipa nguva yakakwana uye nzvimbo kunyatsonzwisisa chii mumwe nyika ine kupa. Western Europe nechitima nzvimbo yakanakisisa kutanga, uye chii nani nzira kufamba pane nechitima!
Sei kuenda Western Europe nechitima?
Kuenda ku Western Europe nechitima ndiyo yakanaka ruzivo sezvo kubatana Via njanji zvakazonaka! Izvi kuita Western Europe nechitima ruzivo ane zvakachipa uye zvakakunakira sarudzo kushanya munyika hwoupenyu vhiki mbiri. boka iri munyika ichinyatsozivikanwa yaro nhaka achinyatsotaurira munhau, unyanzvi, uye incredible akitekicha! Zvokudya zvavo musanganiswa zvakadaro siyana kuti uchawana nayo anenge hazviiti kudzivisa kudya zvose chinouya nzira yenyu. Western Europe kuti akasiyana nzira upenyu ano achasiya iwe Vafadzwa nazvo sezvo iwe vanorasikirwa pachako ari Nightlife uye Maitiro.
Heano mamwe pamusoro dzedu dzinounzwa kuti zvawatanga.
Yaizivikanwa doro, waffles, uye chokoreti, Belgium chikamu chedu Western Europe By Train rwendo uye ndiyo nzvimbo nokusingaperi zvinonakidza kushanyira. Kubva kwayo yainakidza Vapar, zvisingaverengeki mamiziyamu, kunoshamisa Canal Tours kune oma mapurani, nyika iyi ine zvakawanda kupa. Kana ukasarudza kushanyira chete Belgium pane famba, kushanyira nyika mahombekombe – vava nakisisa!
Munhu kunyange anotanga apo? The waini, ari chili kana unyanzvi? The nguva dzose kukwenenzverwa French vakadzi? kana fadza varume? With pamusoro 30 miriyoni Vashanyi vatorwa ose gore, Guta wemwenje anopa ruzivo kufamba kufanana nezvimwe. Wadii kupedza nguva ichitsvaka vakawanda mamiziyamu, mumaresitorendi, uye zvitoro? Kana kutizira kumaruwa, nakidzwa vakadamwa French mahombekombe, uye rwendo kushanyira zvavo wakajeka megomo? Ehe! A bhonasi chikamu? The njanji kwokubatana ndivo vakaramba! Bvuma Western Europe nechitima uye muchaona zvatiri kutaura pamusoro!
Lyon Airport kuenda kuBordeaux Zvitima
Kuvhara nyika yedu Western Europe By Train ndiye Switzerland
Kuenda Switzerland anogara pfungwa yakanaka. Kuenda Switzerland nechitima chiri nani mumwe. Kwete chete ndivo Swiss nezvitima semunhu dzakanakisisa muEurope, zviri zvakare mumwe vakawanda yevedza nyika kushanya nechitima. Switzerland musha dzimwe muEurope vakawanda makungwa akaisvonaka, yakakurumbira pegomo, uye chokoreti inobata. kusiyana Its nemagariro ari dzinokatyamadza! With pamusoro 200 marudzi, ichi ndechimwe nzvimbo kuti ichapa njere itsva uye ruzivo pamusoro ose pakona.
Western Europe nechitima ruzivo yave iri kuwedzera Western Europe mumakore gumi apfuura. Wafunga chii mashomanana nyika kubva munzvimbo dzine kupa, hazvina chaizvo kufungidzira nei. The kakawanda uye hwakavimbika kwokubatana kuti kufamba kuve nyore uye akarongeka, kwazvo. saka, zviri ikozvino chete kwauri kusarudza apo uye kana kuenda.
shandisa Save-A-Rovedzai kuti bhuku rako chitima tikiti pa chipa prices. Enda chero kuenda kutorerwa chinosemesa Réservation yechikoro! Exploring Western Europe nechitima kumbova nyore, uye isu Bet mavhiki ivavo vaviri vachava kumhanya!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwestern-europe-train%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi kuona Embed Code)